စားဖိုမှူးများအတွက် မဖြစ်မနေ လေ့လာသိရှိ မှတ်သားဖို့လိုတဲ့ “Production Circle” ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်မှု | Food Magazine Myanmar
စားဖိုမှူးများအတွက် မဖြစ်မနေ လေ့လာသိရှိ မှတ်သားဖို့လိုတဲ့ “Production Circle” ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်မှု
စားဖိုမှူးများအတွက် မဖြစ်မနေ လေ့လာသိရှိ မှတ်သားဖို့လိုတဲ့
“Production Circle” ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်မှု
ဒီလမှာ “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ့ “Chefs Education Page” မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်တာကတော့ စားဖိုမှူးများအတွက် မဖြစ်မနေ လေ့လာသိရှိမှတ်သားထားဖို့လိုတဲ့ “Production Circle” ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်မှု စက်ဝိုင်းဖြစ်တဲ့ “O.P.R.R.S.I.P.P.S” လို့ အတိုကောက်မှတ်သားထားရမယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်မှု စက်ဝိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ “Production Circle” ကို အတိုကောက်အားဖြင့် “O.P.R.R.S.I.P.P.S” လို့ မှတ်သားထားပြီး အကျယ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
“O” (Ordering) စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ စစ်ဆေးမှာယူခြင်း။
“P” (Purchasing) မှာယူထားသည့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူခြင်း။
“R” (Receiving) ဝယ်ယူထားသည့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအား မှန် ၊ မမှန် စစ်ဆေး လက်ခံခြင်း ။
“R” (Refreshing) ဝယ်ယူပြီး စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်လတ်ဆတ် လန်းဆန်းအောင် သန့်စင်ခြင်း။
“S” (Storing) ဝယ်ယူထားသည့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်း။
“I” (Issuing) သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသည့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း။
“P” (Preparing) ထုတ်ယူထားသော စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ချက်ပြုတ်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်း။
“P” (Producing) အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအား အသင့်စားသုံးနိုင်ရန် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ခြင်း။
“S” (Serving) အသင့်စားသုံးနိုင်ရန် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများကို တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်း။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အစားအစာပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်မှု စက်ဝိုင်းဟုခေါ် သည့်အချက်များထဲမှ စကားလုံး အမှတ်စဉ် (၅) ခုမြောက်ဖြစ်သော “S” (Storing) ဝယ်ယူထားသည့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း များကို စနစ်တကျ သိုလှောင်သိမ်းဆည်း ခြင်းဆိုသော အချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကို ထပ်မံဖော်ပြပေး လိုက်ပါသည်။ အာဟာရပြည့်ဝပြီး သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သည့် အစားအစာများကို ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ် တည်ခင်းရန်အတွက် စနစ်တကျမှန်ကန်သော အပူချိန် (Right Temperature) တွင် ဦးစွာသိုလှောင် သိမ်းဆည်းထားရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ယေဘုယျအားဖြင့် သုံးမျိုး ခွဲခြားသိမ်းဆည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ-
၁။ (Dried Food Storage) ကုန်ခြောက်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရမည့် မှန်ကန်သည့်အပူချိန်။
၂။ (Refrigerator Storage) အသား ၊ ငါးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရမည့် မှန်ကန်သည့် အပူချိန်။
၃။ (Freezer Storage) အေးခဲအစားအစာများ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရမည့် မှန်ကန်သည့် အပူချိန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြထားသည့် ၁။ (Dried Food Storage) ကုန်ခြောက်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရမည့် မှန်ကန်သည့် အပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားရမည့် ပစ္စည်များမှာ –
♦ Flour (ဂျုံမှုန့် ၊ ဆန်မှုန့် ၊ ပဲမှုန့် စသည့် အမှုန့်ခြောက်မျိုးစုံ)
♦ Sugar & Salt (သကြားနှင့် ဆားများ)
♦ Cereals, Rice & All Kinds of Grains (ကွေကာအုပ် ၊ ဆန်နှင့် အစေ့အဆန်မျိုးစုံ)
♦ Dried Beans & Pea (ပဲအခြောက်မျိုးစုံ)
♦ Ready Prepared Cereals (အသင့်စား ကွေကာအုပ်မျိုးစုံ)
♦ Bread & Crackers (ပေါင်မုန့်မျိုးစုံနှင့် မုန့်ကြွပ်မျိုးစုံ)
♦ Oils & Shortenings (ဆီနှင့် အဆီမျိုးစုံ)
♦ Canned & Bottled Foods (Unopened) “သံဘူးနှင့် ပုလင်းပိတ် စားသောက်ကုန်များ (မဖွင့်ဖောက်မီ)”
♦ Potato, Onions, Melon & Squash (အာလူး၊ ကြက်သွန်မျိုးစုံ၊ ဖရဲသီးနှင့် ဖရုံသီးမျိုးစုံ)တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကုန်ခြောက်ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားရမည့် မှန်ကန်သည့် အပူချိန်၌ (50ံto 65ံF (or) 10ံto 18ံC) ၅၀ ဒီဂရီမှ ၆၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် (သို့) ၁၀ ဒီဂရီမှ ၁၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အတွင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ခြောက် ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းသည့်အခါ ခြောက်သွေ့ ပြီး အနည်းငယ်အေးသော နေရာဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကုန်ခြောက်များကို မည်သည့် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်မှ မထားရပါ။ မည်သည့်ဘေးနံရံများတွင်မှ ကပ်မထားရပါ။ ရေယိုကျနိုင်သော ခေါင်မိုး အစပ်များ အောက်တွင်လည်းမထားသင့်ပါ။ အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့် ကိုက်ဖြက်တတ် သော ကြွက်၊ ပိုးဟပ်စသည့် ပိုးမွှားတိရစ္ဆာန်များ၏အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစွာ သိုလှောင်သိမ်းဆည်း သင့်ပါသည်။
၂။ (Refrigerator Storage) အသား ၊ ငါးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ သိုလှောင်သိမ်း ဆည်းရမည့် မှန်ကန်သည့် အပူချိန်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
(အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ သိုလှောင် သိမ်းဆည်းရန် အပူချိန်များ)
အအေးခန်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အစားအစာများ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းသည့်အခါ အောက်ပါအချက်များ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁။ အစားအစာများကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုပြည့်ကြပ်စွာ မသိမ်းဆည်းရန်နှင့် အစားအစာတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြား အနည်းငယ် ခွာထားပေးပြီး လေအေးများ အလွယ်တကူ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားပါရန်။
၂။ အစားအစာများထည့်သွင်းစဉ်နှင့် ထုတ်ယူစဉ် အချိန်တို့တွင်လည်း အလျင်အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အအေးခန်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာများ၏ တံခါးများကို မလိုအပ်ဘဲ မဖွင့်ရန်နှင့် အစဉ်အမြဲ သေချာစွာပိတ်ထားပါရန်။
၃။ အအေးခန်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာများ၏ အတွင်းရှိ စင်များနှင့် အတွင်းနံရံများအား အစဉ်သန့်ရှင်းစွာထားပါရန်။
၄။ အအေးခန်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာများအတွင်း ချက်ပြုတ်ပြီးသော အစားအစာများနှင့် မချက်ပြုတ်မီအစားအစာများကို အတူသိမ်းဆည်းရန်၊ လိုအပ်ပါက ချက်ပြုတ်ပြီးသော အစားအစာ (Cooked Foods) များကို အပေါ်ဘက်တွင်ထား၍ မချက်ပြုတ် ရသေးသော အစားအစာများ (Raw Foods) များကို အောက်ဘက်တွင်ထားပြီး သိမ်းဆည်းပါရန်။
၅။ သိမ်းဆည်းမည့် အစားအစာများကို သေချာလေလုံစွာထုပ်ပိုးပြီး (သို့) သန့်စင်ထားသောဘူးများ (Containers) များဖြင့်ထည့်၍ သိမ်းဆည်းပါရန်။
၆။ သိုလှောင်သိမ်းဆည်း မည့် အစားအစာများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖိကပ်စွာမထားရန်နှင့် ဘူး (Containers) များ၏ အောက်ခြေတို့နှင့် အစားအစာများကို ဖိကပ်ထားခြင်းများ မရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပါရန်။
၇။ အစားအစာများကို ဘူး (Containers) များထဲတွင် ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းသည့်အခါ ဘူးများ၏ အပေါ်သို့ အစားအစာများ မောက်လျှံစွာ မထည့်မိရန်နှင့် နူးညံ့သော အရွက်များ၊ ဆလတ်ရွက်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ရွက်များကိုလည်း လိုအပ်ပါက ရေခဲရေဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးမှ သိမ်းဆည်းရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
အေးခဲအစားအစာများ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။ (Freezer Storage) အေးခဲအစားအစာများ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရမည့် မှန်ကန်သည့် အပူချိန်သည်ကို0ံF (-18ံC to -25ံC )ဖြစ်ပါသည်။ အေးခဲအသားများ၊ ငါးများနှင့် စားသောက်ကုန်များကို အေးခဲရေခဲသေတ္တာနှင့် အအေးခန်း စတိုတို့တွင် သိမ်းဆည်းသည့်အခါ ရေခဲလောင်ကျွမ်းခြင်း (Freezer Burn) ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်အောင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက် နှစ် ချက်ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ –
(၁) အေးခဲပြီး သိမ်းဆည်းထားမည့် အစားအစာများကို အစားအစာထုပ်ပိုးသည့် ပလတ်စတစ်လိပ် (Climb Film / Wrapped) ဖြင့် လေလုံစွာထုပ်ပိုးထား၍ သော်လည်းကောင်း၊ ရေစိုခံပြီး လေလုံသောဘူး၊ အိတ်တို့ဖြင့် သေချာစွာထုပ်ပိုး၍သော်လည်းကောင်း သိမ်းဆည်းခြင်း။
(၂) သိမ်းဆည်းမည့် အေးခဲအစားအစာများကို အမျိုးအစားနှင့် ရက်စွဲများ မပျက် မကွက် ရေးမှတ်သိမ်းဆည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ (First In – First Out) ဦးစွာသိမ်းဆည်းထားသည့် အေးခဲအစားအစာများကို ဦးစွာပြန်လည်ထုတ်သုံးသည့် စနစ်ဖြင့် ရေခဲလောင်ကျွမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အေးခဲအသား၊ ငါးနှင့် စားသောက် ကုန်များကို ပြန်လည် ဖျော်ချသောအချိန် (Defrost / Thaw) တွင်လည်း အောက်ပါ အချက်များကို လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။
(က) သာမန်အေးခဲမဟုတ်သော ရေခဲသေတ္တာ၊ အေးခဲခန်းတို့တွင်ထားပြီး အေးခဲဖျော်စေခြင်း။
(ခ) စီးဆင်းရေအလျင်အောက်တွင်ထား၍ အေးခဲဖျော်စေခြင်း။
(ဂ) မိုက်ကရိုဝေ့ မီးဖို (Microwave) အသုံးပြု၍ အေးခဲဖျော်စေခြင်းတို့ဖြင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုဖြင့် အေးခဲဖျော်ချစေခြင်းကို အသုံးပြုပါက ဖျော်ချပြီးသော အစားအစာများကို ချက်ချင်းချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။ ပြန်လည် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုသင့်ပါ။
ပူနွေးသော အစားအစာများအား တည်ခင်းရန်အတွက် လိုအပ်သောအချက်များကိုလည်း အောက်တွင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
၁။ အသင့်ချက်ပြုတ်ပြီးသော အစားအစာများကို တည်ခင်းသည့်အခါ ရေနွေးဗန်း (Steamed Table) ကဲ့သို့ အပူချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်စေရန် လျှပ်စစ် (သို့) စတာနို (Starno) ကဲ့သို့ အပူပေးကိရိယာများအသုံးပြု၍ အပူချိန် 140ံF (60ံC) တွင် တည်ခင်းသင့်ပါသည်။
၂။ အသင့်ချက်ပြုတ်တည်ခင်းသော အစားအစာများကို အစဉ်အမြဲ သေချာစွာ ဖုံးအုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။ အပူချိန်လျော့ကျနေသော အစားအစာများကို မီးဖို၊ ပေါင်းဖို၊ ရေနွေးခံပေါင်းဖို၊ အိုး၊ ဒယ်များဖြင့် သေချာဆူပွတ်အောင် အပူပေးပြီးမှ တည်ခင်းသင့်ပါသည်။
၄။ အပူချိန်လျော့ကျနေသော အစားအစာများကို ရေနွေးဗန်း (Steamed Table) များထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်၍ အပူပေးခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်းများ မပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
၅။ အသင့်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားပြီး ပူနွေးသည့်အစားအစာများကို မသန့်ရှင်းသော၊ သေချာစွာ ဆေးကြောထားခြင်းမရှိသော မည်သည့်ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ ပန်းကန်၊ ညှပ်၊ ယောက်ချိုစသည့် မည်သည့်မျက်နှာပြင်များနှင့်မှ ထိတွေ့သုံးဆောင်ခြင်းမရှိအောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
IMPORTANT TEMPERATURES IN SANITATION & FOOD PROTECTION.
လစဉ်စားဖိုမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့အသုံးချအသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကို “Myanmar Chefs Development Centre” (MCDC , Yangon) ရဲ့ “Chef Education Page” မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ဆက်လက်လေ့လာမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ Meet you at “MCDC ” Yangon !!!! BeaChef by yourself !!!!Chef Sunny (Secretary General)
“Myanmar Chefs Development Centre”(MCDC),